N'agbanyeghị nke gị isi, Ị Chọrọ Ngwá Ọrụ Kọmputa
Maka Ndị Mmụta & Ndị Nne na Nna Ọmụmụ omimi
N'agbanyeghị nke gị isi, I Kwesịrị Ịchọpụta Nkà
Ndị ọkachamara kọwaa ihe mere ichochi ji dị mkpa na narị afọ nke 21
Ụmụ akwụkwọ kọleji nwere ike ịchụso nyocha nke oke akara. Ma ma ọ bụ na ha bụ isi na azụmahịa, sayensị, ahụike, ma ọ bụ ubi ọzọ, nkà mmụta nzuzo nwere ike ịrụ ọrụ ha.
N'ezie, nchọpụta ọkụ na-enwu ihe karịrị nde mmadụ iri abụọ na isii na-ekpughe na ọkara nke ọrụ ọrụ ntanetị na nchịkwa ego kachasị mkpa chọrọ ọkwa ụfọdụ nke nhazi kọmputa. Ọrụ ndị a na-akwụ ma ọ dịkarịa ala $ 57,000 kwa afọ.
Lynn McMahon bu onye nduzi ulo oru nke New York metro nke Accenture, ndi oru nyocha uwa, ndi oru uzu, na ulo oru ozo. Ọ na-ekwu, sị, "Anyị kwenyere na sayensị kọmputa nwere ike imeghe ọnụ ụzọ maka ụmụ akwụkwọ karịa ịdọ aka ná ntị ọ bụla na ụwa dijitalụ taa."
Ọ bụ Big Business
Ọ bụghị ihe nzuzo na ụmụ akwụkwọ ndị nwere isi na sayensị na-achọ ya ma nwee ike inye ụgwọ ọrụ ụgwọ ọrụ. Randstad's Workplace Report Trends Report depụtara ndị ọrụ sayensị ọmụma dịka otu n'ime ọnọdụ ise kachasị ike iji jupụta. Site na ndị mmepe ngwanrọ na ndị mmepe weebụ na ndị ọkachamara cybersecurity na netwọk na ndị na-achịkwa kọmputa, ụlọ ọrụ na-achọsi ike ịhụ ndị ọrụ IT ruru eru.
Ma ebe ọ bụ na ndị ọrụ ruru eru enweghị ike ịnagide ego, ụgwọ ọrụ na ụgwọ dị iche iche na-atụ egwu, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-enyekwa ọrụ tupu ha agụsị akwụkwọ na kọleji.
Dị ka "Ụmụ akwụkwọ chọrọ: Insight Into STEM Graduates," akụkọ nke National Association of Colleges and Universities bipụtara, onyinye na ịnweta ọnụego maka ndị ọkà mmụta sayensị sayensị karịrị nke ndị isi STEM. Tụkwasị na nke ahụ, ụgwọ ọrụ amalite maka grads ndị a bụ nanị $ 5,000 karịa ndị injinia.
"Ma n'agbanyeghị ilekwasị anya n'ihe mmụta sayensị kọmputa, taa na-anọgide na-abụ ọdịiche dị n'agbata nchọnchọ nkà na ịchọta nkà mmụta sayensị ruru eru," ka McMahon na-ekwu . " N'afọ 2015 (afọ ọhụrụ nke nwere data zuru ezu), e nwere ọrụ ọrụ nchịkọta ọhụrụ 500,000 na United States ma ọ bụ naanị ndị 40,000 ndị gụsịrị akwụkwọ ruru eru iji jupụta ha," ka McMahon na-ekwu.
Ịgụ, Ide ihe, na ntinye
Otú ọ dị, ọ dịkwa mkpa maka ndị ọrụ na mpaghara ndị ọzọ nwere nkà mmụta sayensị kọmputa. Ọ bụ ya mere McMahon ji kwenye na ụmụ akwụkwọ kwesịrị ịkụziri ndị ọkà mmụta sayensị n'oge ha bụ nwata ma kwesiri imesi ike dị ka nkà ndị ọzọ dị mkpa .
Otu onye ghọtara na ọ dị mkpa maka ndị ọ bụla nwere nkà ndị a bụ Ketul Patel, onye nduzi nduzi na codcamp Coding Dojo. Site na ulo akwukwo na-agbasa gburugburu obodo a, Coding Dojo zụrụ ihe karịrị otu puku ndị mmepe, ndị ụlọ ọrụ ndị a akwụgoro dị ka Apple, Microsoft, na Amazon.
Patel kwenyere na McMahon na e kwesịrị inye ihe nzuzo dị mkpa. "Ntuchi bụ nkà dị oké mkpa nke, n'echiche m, na-enwe mmekọrịta na mgbakọ na mwepụ, sayensị, na nkà mmụta asụsụ," ka ọ na-agwa.
Ụmụ akwụkwọ ndị na-enweghị mmasị na ọrụ ọrụ IT nwere ike iche na Patel na-ekwupụta na ọ dị mkpa ịchọta nzuzo, ma ọ na-ekwu na ọ bụghị banyere ịmụpụta mmezi ahụ dịka ọ dị banyere ịmepụta echiche dị oke mkpa na nsogbu nkwụsị nsogbu dị mkpa na mpaghara ọ bụla ọrụ . "Ịmụta otú e si ede akwụkwọ nyere ụmụaka ohere ọzọ iji kụziere ebe ha na-eme ihe, bụ nke na-enyere ha aka n'isiokwu ndị ọzọ ha."
Ọdịdị Nke Ahụ
Nkà na ụzụ emeela ka akụkụ ọ bụla nke ndụ gbanwee, ọ bụghị ndị ọrụ ọrụ. "N'agbanyeghị ụdị ụlọ ụmụ akwụkwọ na-ahọrọ ịchụso - ma ha na-aga ahịa, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nkà mmụta ọgwụ, ma ọ bụ nkà, sayensị kọmputa na-enye ntọala maka ihe ịga nke ọma na usoro ọ bụla nke ọ bụla nke narị afọ nke 21," McMahon na-ekwu.
Ọ bụ echiche nke Tuft University's Karen Panetta, prọfesọ nke nkà na ụzụ na kọmputa, na onye na-akpakọrịta maka agụmakwụkwọ gụsịrị akwụkwọ.
Panetta na-ekwu na ọ bụ ezie na ịdọ aka ná ntị nke nwa akwụkwọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla ga-eme ka ha jiri nkà na ụzụ mee ihe. "Anyị na-eji teknụzụ mee ihe niile site n'echiche na ịtụgharị uche n'echiche, ịzụta mkpebi, na ichokọta data dị ka ụzọ nkwurịta okwu si emetụta ndị na-eme iwu," ka Panetta na-ekwu.
O kwenyere na sayensị kọmputa dị mkpa n'ihi na ọ na-enyere ụmụ akwụkwọ aka ịmụta otú e si eche echiche n'ụzọ ezi uche dị na ya. "Nke kachasị mkpa, ọ na-enyere anyị aka ịtụle ihe niile nwere ike ime ma jiri ngwọta na-atụ anya iji ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị."
"Ụwa na-aga n'ihu na nkà na ụzụ na nzuzo bụ nkà nke na-adịghị mkpa naanị maka ịmepụta ngwanrọ," McMahon kwubiri.
7 Ihe jọgburu onwe ya, na-adịghị mma, ezi ihe mere ị ga-eji debanye aha na klas Online
Isi nke 10 kachasị ịghọ Data Scientist
Nchịkọta State-by-State of Free Online Public Schools, K-12
Ihe dị mkpa nke usoro ọmụmụ
Ngalaba Klas na Ọrụ na-agba agba
Esi nweta nyocha site na nyocha
College Grads chọrọ nkà data, Ma Ị Pụrụ Ịmụta Ịntanetị maka Free
MLA Style na Parenthetical Citations
8 Atụmatụ Atụmatụ Iji Kwadebe maka Ule
Mahadum Sioux Falls Admissions
Esi edere akwukwo akwukwo di nma
Ekpere Angel: Na-ekpe Ekpere onyeisi ndị mmụọ ozi Berakiel
Mandarin Chinese Words maka ụgbọ ala na ụdị nke njem
Nhazi ụlọ: Nhọrọ ndị ọzọ na Ahịhịa
Esi esi na Radians ka Ogo na Excel
Nyochaa usoro nyocha analysis: otu esi eme ka ájá aja
Onyinye Ekele 7 kachasị maka Ụmụaka
Usoro mmemme nke akwukwo akwukwo di elu maka umu akwukwo di elu
Lake Mungo, Willandra ọdọ mmiri, Australia
Na-edezi faịlụ IMI site na Delphi
Nkọwapụta Amamihe na Ihe Nlereanya
Abụaka 22 kachasị mma nke oge niile
Ụlọikpe Iwu na Okwu Nkwado
Kedu (na ihe mere) ndị Katọlik ji eme ihe ịrịba ama nke Cross
Mass Spectrometry - Ihe Ọ Bụ na Otú O Si Arụ Ọrụ
Ememe Tanabata na Japan na Akụkọ Tanabata
Amaokwu Baịbụl Banyere Ịhụnanya
Na-agbanye na Nkume Music Piano
Nnupụisi Pontiac na Kịtịkpa dị ka ngwá agha
Mormonad Posters na Art Searchable Site Atiya, Mbụ na More
Kedu ihe dị iche? Nkowa di mkpirikpi n'igosi okwu iri ato nke okwu
Kedu ihe na - eme ma ọ bụrụ na ị gwụla oge maka oge gị?